किन आउँछ नकारात्मक सोचाइ, कसरी भर्ने सकारात्मक सोच ? – bampijhyala.com
Home > जीवन शैली > किन आउँछ नकारात्मक सोचाइ, कसरी भर्ने सकारात्मक सोच ?
५ बैशाख २०७८, आईतवार १५:२६ bampijhyala
केही भावनाहरू नकारात्मक विचारहरूसँग सम्बन्धित हुन्छन् । जस्तै क्रोध, निराशा आदिले दिमागमा बास बस्न थालेपछि यसलाई हटाउन मुस्किल हुने गर्छ । जसरी विचारहरू दबाइन्छन् त्यसैगरी उनीहरूको दिमागलाई नकारात्मक भावले घेरा हाल्न थाल्छ । त्यसकारण सकेसम्म दिमागमा सबै सकारात्मक विचारहरूलाई मात्रै प्रवेश दिनुपर्छ । जसरी उज्यालो अँध्यारोमा परिणत हुन्छ, अन्धकार स्वत: अदृश्य हुन्छ, त्यस्तै सकारात्मक विचारहरूले नकारात्मक विचारहरू हटाउन सुरू गरौं । सकारात्मक विचारहरू विकास गर्न, व्यक्तिले बुद्धि र जीवनको बारेमा सकारात्मक भएर सोच्न थाल्नुपर्छ । आध्यात्मिक पठनले सकारात्मक सञ्चालको लागि धेरै मद्दत गर्छ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले बैशाखभित्रै विद्युत उत्पादन शुरु गर्ने
एमाले अनुशासन आयोग प्रमुख बोहोराको ओलीलाई पत्र : भोली बोलाएको समितिको बैठक तत्काल स्थगित गर्न माग
१ जेष्ठ २०७८, शनिबार २२:३४ bampijhyala 0
गीत गाउने सानैदेखिको रहर हो प्रविशा अधिकारीको। तर गायिका...
तामाकोशी गाउँपालीकामा कोरोना संक्रमण तिब्र, आज बेलुका ५ बजे देखि ८ गते बेलुका ५ बजेसम्म शहरे शिल ५ बैशाख २०७८, आईतवार १५:२६
सम्झनामा जेठ ३ ५ बैशाख २०७८, आईतवार १५:२६
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? ५ बैशाख २०७८, आईतवार १५:२६
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव ५ बैशाख २०७८, आईतवार १५:२६
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक ५ बैशाख २०७८, आईतवार १५:२६